DAWLAD AAN U TUDHAYN SHACABKEEDA MAXAA LAGA YEELAA …. BAL DAYAAY. | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
DAWLAD AAN U TUDHAYN SHACABKEEDA MAXAA LAGA YEELAA …. BAL DAYAAY.
Dawladi taa tii u diir-naxda dadkeeda, dalkeeda iyo adeegga bulshada ay mas’uulka ka tahay, haddii ay ku sifoowdo hanka dawladnimo . Dawladi waa tii shacabkeeda u raadisa baahiyaha kala duwan sida nolasha caadiga ah, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kala duwan ee bulshada kor u soo qaada nolashooda dhinac walba . Dawladda Somaliland waxa ay ku sifowdey boob, hanti-boobka, hagardaamada bulshada, u tudhid la’aanta dadkeeda, arxan la’aanta iwm , Wax ay u qabato dadkeeda daayoo wixii Alle cid ugu soo dhiibo ayay doontaa in ay maroorsato oo marinkii ka leexiso . Waxa jirta Heyad samafal ah oo khayriya oo la dhaho Khadiija foundation oo ay caawiso laanqayrta Case e Dawladda Imaaraadku oo quudisa ilaa 8000 oo agoomo ah dalkoo dhan, u adeegta dadka naafada ah, wax siisa qoysaska danyarta ah oo haddana ku jirta inay wax tarto dadka danyaroobey ee xoolihii ka baxeen abaaraha ee tuulooyinka iyo magaalooyinka ku soo hooydey . Heyaddaasi waxa ay , kolka laga tago Agoomaham, raashin siisey Gobolka Saaxil, Bariga Burco iyo biyoba abaarihii, waxa ay hadda raashin u keentay Agoomahaa, naafada, qoysaska danyarta ah iyo dadkii xooluhu ka madheen ee degmada Sheekh, koonfurta Burco iyo Gobolka Daad-madheedh. Raashinkaa oo ilaa ciiddii dekedda Berbera yaalla oo loo diidey in loo geeyo shacabkaa baahan , iyada oo dawladdaa dhani Heyadda ku eedaysay inay Waddani u wado raashinkaa oo ay gelisey siyaasad iyo wax aan la garanaynin, raashinkii weli halkaa ku xanniban yahay oo ay caanihii kulaylkaa dhacayaan , habeen walbana lacagi ku dul-socoto. Dawladdii laga eegaayey inay u gargaarto shacabkeeda waa ta aka carqaladaysay raashinkii laanqayrta Case e Imaaraatku ugu deeqday dadkeennaa tabaalaysan iyo agoomaha. Hayadaa kolkii ay Saaxil iyo Bariga Burco ay raashinkan oo kale u qaybinaysey lama odhan xisbi bay u wadaa, maxaa manta keenay Waddanay u waddaa, iyad oo dadkaa tabaaladu haysaa ay isugu jiraa saddexda Xisbiba oo aanay kala sooc lahayn . Raashinkaa waxa cashuur-dhaafka u sameeyey , lana habeeye Wasiirka Diinta iyo Awqaafta, Khaliil, waxase carqaladeeyey sida naloo sheegay wasiirada kala ah samsan, M.Xaashi iyo wiilka moorgan la dhaho oo aan cidhib ka rabin shacabka, xiisado iyo kala qayb-qaybin dalka ka dhex wada, wax ay u taraan daayoo . Waxa kale oo la sheegay in M/daxweyne ku xigeenku, Seylici , oo musharax ahi Hayadda ka codsaday inay ku soo wareejiyaan waraaqaha raashinta dhammaan isaga, taasoo iyana keentay ujeedooyin kale iyo damac horleh, maadaam uu xaadir yahay Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo oo mas’uuliadda Dadku ilaa hadda saaran tahay. Madaxweyne, raashinkaasi weli dekedda ayuu ku xanniban yahay iyadoo wasiiro si u xaglinayaa ay carqaladeeyeen oo bartaa ku haystaan, Agoomihii, naafadii iyo danyartii abaaraha ka soo barakacay ee caydhoobey ay sugayaan . Kulmiyaha cusubi hadii uu hanti u rabo kaambeynka meelo kale ha ka raadsado ee yuu ku soo meelaysan raashinka Laanqayrta Case e Imaaraadku Dadkeenna ugu deeqday… waa naxariis darro dadka lagu hayo. Madaxweyne Wasiiradaa ummaddaa baahan kala hadal oo raashinka u sii daa, karaamadaada ayay wax yeelayaane .
Waxa kale oo in wararka la soo geliyey in dacwadi ka timid Ceerigaabo, markii horena la lahaa waddani ayay u waddaa, waa carqaladayn toos ah oo sumcadda lagaga dilaayo Heyaddaa samafalka ah iyo boob la rabo in raashinka laga booboo o lagu tagrifalo, waa damiir lahaa ka taagan Wasiiradaa boobka caadeystey, cidna aan u naxaynin. Markaa, waxa aanu leenahay, m/weyne dalka yaan lagaa hoos xukumin, lagu danaysan, dadka la hoojin eek a kacoo arrintaa raashinka iyo waxa la midka ahba wax ka qabo oo Raashinkaa dadkaa baahan u sii daa . hayaddu sida la sheegay kaalmada xagga Galbeedka ayay wax u soo waddaa, 8000 oo Agoomo ah iyo qoysaskoodana wax bay siiyaa iyada oo u marisa baananka siiba Darasalaam iyo D/Shiil oo ay la xidhiidhaan . Heyaddu, khadiija Foundation, waxa ay u qalantaa in abaalmarinno la siiyo ee maaha in lays-hortaago oo shacabka la cuna-qabateeyo, dhuuniga lagala dagaalamo . Arrintaas wasiiradu ka dambeeyaan waxa ay ku taagantay oo aanu hoosta ka xarriiqaynaa in la doonaayo raashinkaa lagala wareego oo lagu tagrifalo, in sumcadda laga dilo oo lays nacsiiyo Laan-qayrta Case e Imaaraadka, dabeed laga hantiyo iyo shacabka oo aan loo ogolayn in wax la taro oo malaa la diidan yahay Aaggaa hadda raashinka loo wado, kuwii horeba lama diidayney oo cadaadis ka dambeeyo . Madaxweynaha, Axmed Maxamed Siilaanyo, waxa aanu leenahay arrimahaa Raashinka iyo wixii dalka ka dhacaayaba wax ka qabo, oo Raashinkaa danyarta iyo agoomaha u sii daa, karaamada iyo koofiyadda ay dhinacooda-uma –tudhayaashu kaa tuurine . Shacabkana waxa aan leeyahay u soo jeesta kaalmadiina, illo dheerna ku eega Wasiiradaa hortaagan hungurigiina iyo kaalmadaa laydiin keenay , TV-yada ka hadla oo dantiina sheegta oo dawladda la soo hadla, Madaxweynaha, wasiiradu waxba idiinma soo sidaane oo kaambeynka Kulmiyaha cusub bay ku dhololayaane, arxan haka filanina kulmiyaha Cusub ee kala xidhiidha Madaxweynaha Dalka ,Axmed Siilaanyo . Hayadda Khadiija Foundation, iyana waxa aan leeyahay haddii laguu sii daayo Raashinkaa qaybintiisa ha lagaala warhayo oo ha lagula qaybiyo goobjoog ahaa, haddiise waxba laga qaban waayo dekeddaa ha ku basbeelo, dhegley ku shub dhan walba ha ku qaddee ama Shacabka Boosaaso u rar, halkaas baan loo diideyne ha ka walaacin iyaba waa dad soomaaliyeede , Laanqayrta Case ee Imaaraadkana u sheeg oo la socodsii, Wasiiradani ma rabaa in Dadkooda wax loo taree, Madaxweynahase Ka war sug oo ha dhaafin . Shacbiga Somaliland, gudo iyo dibeddba waxa aanu u sheegeynaa inay la socdaan hagardaamada iyo tudhaale la’aanta loo geysanaayo dadkooda Agoomaha ah iyo qoysaskooda,gaar ahaan kuwa Dugsiyada 6 Gobolba ku kala jira ee la quudiyo, Naafada iyo danyarta, gaar ahaan kuwa Abaarihii xoolihii ka dhammeeyeen ee duleedka Tuulooyinka ku soo xoomay, wax la’aanta la jiifa iyo caydha ee Lacagtii ka soo kabashada Abaaraha ee wax loogu tari lahaa ee ilaa ardayda laga ururiyey loo diidey ee New kulmiye ku ololaynaayo, maxaa loo siin waayey dadkii loogu talogalay amase loogu diidayaa raashinkaa mucaawinada ah ee Laanqayrta Case e Imaaraadku ugu soo deeqeen .. walaalayaal arrimahaas iyo wixii inagu xunba ka soo hadla,Alle haydin barajkeeyee oo u hiiliya walaalkaa ka la dulminaayo iyo ka wax dulmiyayaba,dawladdana waxa aanu leenahay Dadka ha loo tudho oo kaalamada ha loo sii daayo .
Allaah Mahad leh,Wa billaahit tawfiiq .